Iindaba -Ndimele ndihoye ntoni xa itraki yetrakhi ishushu?
1. Phambi kokusebenza kwesikhephe, iprojekhthi yokulwa ukuphuphuma kufuneka isuswe. Emva kokuba umsebenzi we-steamer ugqityiwe kwaye itanki ipholile, iya kubuyiselwa kwindibano entsha.
2. Phambi kokusebenza kwesikhephe, iplagi enefusible emazantsi evaluva yolwandle kufuneka isuswe. Emva kokuba umsebenzi we-steamer ugqityiwe kwaye umzimba wetanki upholile, uyabuyiselwa kwindibano entsha.
3. Phambi kokusebenza kwesikhephe, imaski yombhobho wokubuyisela ioyile kunye negesi kufuneka isuswe. Emva kokuba umsebenzi we-steamer ugqityiwe kwaye umzimba wetanki upholile, uya kubuyiselwa kwindibano entsha.
4. Ngexesha lokusebenza komphunga, umbhobho womphunga kufuneka ubotshelelwe ngokuqinileyo emlonyeni wetanki ukukhusela umbhobho womphunga ekubeni ulahlwe ngaphandle kwetanki kwaye ubangele ukutsha.
5. Abasebenzi abasebenza kwi-steamer kufuneka banxibe izinto ezifanelekileyo zokukhusela abasebenzi. Xa uhambisa kwaye ulungisa umbhobho we-steam, kufuneka uphathwe ngobumnene ukukhusela ukungqubana phakathi kombhobho kunye nomzimba wetanki.
6. Emva kokuba umsebenzi we-steamer ugqityiwe, vala i-valve yombhobho kwaye uthathe umbhobho we-steam.